Kaaba Keeniyaatti hojjattoonni albuudaa 36 ajjeefaman - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Kaaba Keeniyaatti hojjattoonni albuudaa 36 ajjeefaman
Kaaba Keeniyaatti hojjattoonni albuudaa 36 ajjeefaman
Lammiiwwan Keeniyaa 36 hidhattoota leellistoota Islaamaan, Somaaliyaa irraa dhufuu hinoolle jedhamanii shakkaman, ajjeefamuun isaanii gabaafame. Ajjeechaan kuni kan raawwate Kaaba biyyattii nannoo Mandheeraattii kan biyya Somaaliyaa daangessu keessatti. Namoonni du’an hujii albuuda baasuu irratti kan bobba’an turan. Akka jecha itti gaafatamaa poolisii naannoo saniitti kanniin ajjeechaa raawwatan hundumtuu miliqaniiru.
Ajjeechaan kan raawwate hojjattoonni erga rafanii booda. Hidhattoonni akkuma isa kana duraa namootaa amantaadhaan gargarbaasuudhaan kan ajjeesan. Ammas hojjattoota amantaa Kiristanaanummaa hordofan qofa kan haleellaa kanaan lubbuu isaanii dhaban. Kanniin ajjeefamaniin alatti, hojjattoonni qaama isaanii dhabanis jiru.
Haleellaa kana natu raawwate jechuun hanga ammaatti qaamni itti gaafatamummaa fudhate tokko hinjiru. Mootummaan Keeniyaa garee Al-Shabaabiin alatti kan badii kana raawwatu eennuyyuu ta’uu hindanda’u jedha. Rukuttaa torbaan dabre keessa konkolaataa irratti raawwatee namoonni 28 bifuma wolfakkaatuun ajjeefamaniifis, Al-Shabaabii itti gaafatamummaa fudhateera.
Previous articleAllaattiin basaastuu Taalibaan jedhamte Afgaanistaan keessatti rukutamte
Next articleNiitii fi ilmoon Al-Bagdaadii Libaanos keessatti qabamuun isaanii ifa godhame